ဦးအောင်သိန်းလင်း အမတ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းရေး လက်မှတ်ထိုး တင်ပြမည် | ဧရာဝတီ
အောင်သက်ဝိုင်း| August 16, 2012 | Hits:12,040
| | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ) မှ ဦးအောင်သိန်းလင်းကို ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းရန် တောင်းဆိုထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ တထောင်ကျော်၏ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုလွှာများအား သြဂုတ်လ တတိယပတ်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံသို့ တင်ပြတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သိန်းလင်း (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
တရုတ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Southern Weekend China သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ဦးအောင်သိန်းလင်းက ကုလသမဂ္ဂနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် တို့ကို မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေး ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်သူများ ဖြစ်သဖြင့် အယုံအကြည် မရှိကြောင်း၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖခင် အရှိန်အဝါဖြင့် ကျော်ကြား နေသူဖြစ်ပြီး NLD ကို ထောက်ခံသူများသည်လည်း အရူးများသာဖြစ်ကြောင်းကြောင်း၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အမိန့်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းထားသော မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို မဖြစ်မနေ ပြန်စရန်လိုကြောင်း စသည့် အငြင်းပွားဖွယ် အမြင်များကို ပြောဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန် တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတထောင်ကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဦးအောင်သိန်းလင်းကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရုပ်သိမ်းဖို့ တောင်ဥက္ကလာပ မဲဆန္ဒ ရှင်တွေဆီက လက်မှတ်စုလိုက်တာ အားလုံးပေါင်း တထောင်ကျော်ရှိပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ မူလမဲဆန္ဒရှင်များအနက်မှ အနည်းဆုံး တရာခိုင်နှုန်းက အမတ်အဖြစ်ကနေ ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနိုင်တယ်လို့ တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းတယ်။ လာမယ့် သြဂုတ် ၂၁ ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့လက်မှတ်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆီ တင်ပြီးလောက်ပါပြီ” ဟု လက်မှတ်ရေးထိုး လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်နေသူ ဦးမင်းအောင်က ပြောသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း ၉ ပါ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊ ပုဒ်မ ၃၉၆ တွင် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်၏ မူလမဲဆန္ဒရှင်များအနက် အနည်းဆုံး တရာခိုင်နှုန်းတို့က တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်းတန်းချက်ကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ဆက်လက် ထမ်းရွက်စေရန် မသင့်ကြောင်း သဘောရှိလျှင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရေး ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ဦးအောင်သိန်းလင်းကို အမတ်အဖြစ် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရေး တောင်းဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ တာဝန်ရှိသူတဦးကမူ မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ဥပဒေပါ အခွင့်အရေးဖြစ်သည့်အတွက် မည်သို့မျှ မပြောလိုကြောင်း ဆိုသည်။
“မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေဆီမှာ ကိုယ်ရွေးကောက်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို မယုံကြည်တော့ဘူး၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းတယ်လို့ထင်ရင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တင်ပြတောင်းဆိုနိုင်တယ်လို့ ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက် အခုလို ပြည်သူတွေက တောင်းဆိုတာက ဥပဒေပါ အခွင့်အရေးပါပဲ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးဖြစ်ဖြစ်၊ NLD ဖြစ်ဖြစ် အမတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ပြည်သူကို အလေးထားရမယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်စေတာပဲ။ အပြစ်ရှိတာ၊ မရှိတာကတော့ ကော်မရှင်က စစ်ဆေးပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စပဲ” ဟု အဆိုပါ ပါတီတာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကလည်း ဦးအောင်သိန်းလင်းနှင့် တရုတ်သတင်းစာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကို သေချာစွာစိစစ်ပြီး အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိကြောင်း၊ ဦးအောင်သိန်းလင်း၏ သဘောထားသည် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ သဘောထားမဟုတ်ဘဲ ၄င်း၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်သဘောထားသာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
NLD တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် တာဝန်ခံ ဒေါက်တာစောနိုင်က ဦးအောင်သိန်းလင်းကို အမတ်အဖြစ် ရုပ်သိမ်းရေး တောင်းဆိုမှုသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးသော နိုင်ငံရေးသမားများအနေဖြင့် ပြည်သူနှင့် အမြဲထိတွေ့ပြီး ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးဆောင်ရွက်စေရန် နှိုးဆော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ငါအမတ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ပြောချင်ရာပြော၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့မရဘူး။ မဲပေးထားတဲ့ ပြည်သူတွေမျက်နှာကို ကြည့်ရမယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်လို့ မရဘူး။ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေမျက်နှာကို မကြည့်ရင် ပြည်သူတွေကလည်း ပြန်ပြီး ဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတာကို ပေါ်လွင်စေတယ်။ ဒီသဘောတရားက ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်” ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
မကြာသေးမီတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ဦးအောင်သိန်းလင်းကို ပါတီ၏ ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်ခံရာထူးမှ ချထားလိုက်ပြီး ၄င်း၏နေရာတွင် ခရမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်၊ ယခင်မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်သိမ်းနှင့် အစားထိုးခန့်ထားလိုက်သည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> sunny August 16, 2012 - 12:37 pm	There are too many people like him in myanmar governent. Thus in order to be clean government, Thein Sein need to remove those people. The sooner, the better.
Reply	SayaGyee Mya Khine ( Min Ah Thet Nga Pay ) August 16, 2012 - 12:48 pm	Loose tongue costs life. He has already shown his standard during campaign in last by-election.
How come he became to have this rank ? Unimaginable ! Give hima‘ Kyay-Zee ‘ and ‘ Maunggg ‘ to do one of the noble jobs ‘ NateBan Saw ‘ , after , if , he had been trialed for any corruption. Nat Ban Saw is appropriate for him after serving appropriate action.
Reply	kyaw soe August 16, 2012 - 2:49 pm	Who are foolish? I think you are the one who stupid. Whatever you say ,see yourself what is your post. Don’t proud so much.
Reply	Sai Kyaw Naing Win August 16, 2012 - 3:10 pm	တရာခိုင်နှုန်းလား…. တစ်ရာခိုင်နှုန်းလား . . . စာလုံးပေါင်းသေချာစစ်ဆေးစေချင်ပါသည်. . .
Reply	panpwint August 16, 2012 - 9:03 pm	ဦးအောင်သိန်းလင်း အလိုမရှိ။ ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဆက်မထားပါနှင့်။ ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ် ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ ရဲ့ နာမည်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို အထိမခံချင်ရင် ဦးအောင်သိန်းလင်းကို ပါတီမှ ရာသက်ပန် ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။
Reply	Ma Bote Sone August 16, 2012 - 9:14 pm	There is no word in my mind to constructasentence to praiseaman who dare to express and publicise his feelings against the president and majority.
Reply	minsoeaung August 16, 2012 - 9:54 pm	ပြည်သူ့ဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ။ကိုယ်စားလှယ်များ ပြည်သူ့အကျိုးထမ်းနိုင်ပါစေ။
Reply	yinmoesan August 16, 2012 - 10:47 pm	ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကပြည်သူကိုအကျိုးမပြုရင်နှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုရမှာက မဲပေးသူတွေရဲ့
တာဝန်ပါပဲ။ထောက်ခံအားပေးပါတယ်။ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် မဟုတ်တာလုပ်ရင် ကန့်ကွက်ရတာ
Reply	မောင်မောင် August 17, 2012 - 8:52 am	ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဘာလုပ်မလဲဆုိုတာကြည့်ရသေးတာပေ့ါ။ အရင်တုန်းက ဟုိုလူကုို သတိပေး ဒီလူသတိပေးနဲ့။ သူ့လူကုိုဘယ်လုိုလုပ်မလဲဆုိုတာ သေချာစောင့်ကြည့်ပီး တင်ပြကြပါစုို့။
Reply	anaingko9 August 17, 2012 - 1:03 pm	ဦးအောင်သိန်းလင်းဟာ မြန်မာအမျိုးသားရေးကိုစော်ကားတယ်။ဒါကြောင့် ၁။ပြည်သူတွေကိုတောင်းပန်ပါ။ ၂။အမတ်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ပါ။ ၃။၀န်ကြီးအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ပါ။
Reply	swe htwe August 18, 2012 - 1:44 am	We will support one percentage of voters.Let’s praise them !
Reply	hmt August 18, 2012 - 9:07 pm	ထွက်သင့်တာကြာပါပြီ